Ummanni Naayijeeriyaa filannoo prezdaantummaa fi miseensota paarlaamaatiif sagalee kennuu jalqabe - NuuralHudaa
Ummanni Naayijeeriyaa filannoo prezdaantummaa fi miseensota paarlaamaatiif sagalee kennuu jalqabe
Komishiiniin filannoo Naayijeeriyaa torbee dabre hanqina meeshaalee filannoo fi lojistikii isa muudateen guyyaan filannoo February 23, 2019tti dabarsuu beeksisee ture. Haaluma kanaan ummanni biyyatti Sabtii har’aa Prezdaantii fi miseensota paarlaamaa filachuudhaaf sagalee kennuu kan jalqabe tahuun beekamee jira.
Ummanni biyyattii miiliyoona 85 tahu sagalee kennuuf galmaahee kan ture yoo tahu, paartiileen siyaasaa 90 ol fi kaadhimamtoonni prezdaantummaa 73 filannoo kana irratti wal dorgommiif kan dhihaatan tahuu gabaafame. Kaadhimamtoota prezdaantummaaf dhihaatan jidduu Mr Atiku Abubakar prezdaant Muhammaduu Buhariif morkataa cimaa ni ta’a jedhamee kan tilmaame tahuu gabaasni arganne ni mul’isa. Prezdaant Muhammaduu Buhaarii paartii biyya bulchaa jiru kan All Progressive Congress jedhamu bakka bu’uun kan dorgomu yoo tahu, Itti aanaan prezdaantii duraanii Mr Atiku Abubakar ammoo paartii mormituu biyyattii guddicha Peoples Democratic Party (PDP) jedhamu bakka bu’uun dhihaate.
Biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa heddu filannoo Naayjeeriyaa kana taajjabuudhaaf ogeeyyota isaanii gara biyyattiitti kan ergan yoo tahu, Gamtaan Afrikaatis jila taajjabdootaa muummicha ministeera Ityoophiyaa duraanii Obbo Haylamaariyam Dassaalenyiin durfamu garasitti bobbaasee jira.
Naayjeeriyaan ummataa miiliyoona dhibba tokkoo fi miiliyoona 95 ol kan qabdu yoo tahu, Afrikaa keessatti bay’inna ummataa fi guddina diinagdeetiin sadarkaa jalqaba irra jirti. Galiin Naayjeeriyaan qabeenya boba’aa irraa argattu guddaa tahus, malaamaltummaa, walitti bu’iinsaa fi hanqina barnootaatiin wal qabatee, lammiileen biyyattii miiliyoona 85 ol ammas hiyyummaa hamtuu keessa kan jiraatan tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.